ဦးနှောက်ရောင် ခြင်း (Encephalitis) အကြောင်း - Hello Sayarwon
ဦးနှောက်ရောင် တယ်ဆိုတာ ဦးနှောက်အတွင်းသားရောင်တာကို ပြောတာပါ။ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်တာနဲ့ မတူပါဘူး။ ဦးနှောက်ရောင် တာက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တာများပါတယ်။ ရှားရှားပါးပါး ဘတ်တီးရီးယားနဲ့ မှိုကြောင့်ဖြစ်တာလဲရှိပါတယ်။ ဦးနှောက်ရောင် တာက ပြင်းထန်တာမျိုးရှားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့သူတွေမှာ အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက စောစောသိပြီး စောစောကုနိုင်ဖို့ပါပဲ။
ဦးနှောက်ရောင်တာက အစောပိုင်းမှာတော့ တုပ်ကွေးမိသလိုမျိုး ဖျားတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ ကိုယ်လက်နာတာ၊ နှုံးတာ စတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုဆိုးလာရင်တော့
မျက်နှာ ဒါမှမဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်မှာ အာရုံခံစားမှု မရှိတာ၊ အကြောသေတာ
အပြော ဒါမှမဟုတ် အကြားထိခိုက်တာ
အဖြစ်အများဆုံးက ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ပါ။ ဘတ်တီးရီးယားတွေ၊ ရောဂါပိုးကြောင့်မဟုတ်ဘဲ တခြားအကြောင်းကြောင့် ဦးနှောက်ရောင် တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဦးနှောက်ရောင်တာကို နှစ်မျိုးခွဲလို့ရပါတယ်။
Primary encephalitis. ဒါက ဗိုင်းရပ်စ် ဒါမှမဟုတ် တခြားဦးနှောက်ကိုထိခိုက်စေတဲ့ အရာတစ်ခုခု ဦးနှောက်ကို တိုက်ရိုက်ရောက်လာတာပါ။ တစ်ခါတစ်လေ အရင်က ငုပ်နေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပြန်ကြွလာတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Secondary encephalitis. ဒါကတော့ ခုခံအားကမောက်ကမဖြစ်လို့ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ ရောဂါပိုးကို တိုက်ထုတ်တဲ့နေရာမှာ ခုခံအား ရောဂါပိုးအပြင် ဦးနှောက်မှာရှိနေတဲ့ ဆဲလ်အကောင်းတွေကို တိုက်ထုတ်ပစ်ပါတယ်။ ဒါကို ပိုးဝင်ပြီးနောက်ပိုင်း ဦးနှောက်ရောင်ခြင်း (Post infection encephalitis)လို့ခေါ်ပါတယ်။ ပထမရောဂါပိုးဝင်ပြီး ၂ပတ် ၃ပတ်လောက်နေရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဦးနှောက်ရောင်တာက ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အဖြစ်များတာဆိုတော့ အောက်မှာ အဖြစ်အများဆုံး ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို ပြောပြပေးထားပါတယ်။
ရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစား ၁နဲ့ ၂
တခြားရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ်များ (ဥပမာ Epstein-Barr virus၊ ဆင်ရေယုန်၊ ရေကျောက်)
ခြင်ကတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် (ဥပမာ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ဗိုင်းရပ်စ်)
ဝက်သက်၊ ပါးချိတ်ရောင်နဲ့ ဂျာမန်ဝက်သက်ရောဂါပိုး
ဖြစ်ပြီးဘယ်လောက်အကြာမှာ ကုသမှုခံယူတာလဲ စတဲ့ အချက်တွေအပေါ်မူတည်ပါတယ်။
တချို့ အခြေအနေ သိပ်မဆိုးတဲ့ သူတွေကျတော့လည်း ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ ပြန်ကောင်းသွားကြပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးလည်း မဖြစ်ပါဘူး။
တချို့ တွေကျတော့လည်း ပြင်းထန်လွန်းလို့ ကိုမာဝင်တာ၊ သေဆုံးတာအထိဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တချို့ ကျတော့လည်း နောက်ဆက်တွဲတွေကျန်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ ဝင်တာတောင် တချို့က လပိုင်းလောက်ပဲကြာပြီး တချို့က သေရာပါစွဲသွားပါတယ်။ တွေ့ရများတဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေကတော့
စကားပြော ထိခိုက်တာ စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးနှောက်ရောင်တာကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် ဦးနှောက်ရောင်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် မဝင်အောင်ကာကွယ်ရမှာပါ။ ဒါကြောင့်
လက်ကို မကြာခဏ ဆေးပါ။
တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ပစ္စည်းတွေကို မျှဝေမသုံးစွဲပါနဲ့။
ခြင်ကိုက်မခံပါနဲ့။ ခြင်ကိုက်မခံရအောင်ဆိုရင် လုံလုံခြုံခြုံဝတ်ပါ။ ခြင်မကိုက်အောင် ကာကွယ်တဲ့ လိမ်းဆေးလိမ်းပါ။ ဆေးစိမ်ခြင်ထောင်နဲ့အိပ်ပါ။ ခြင်ပေါက်ပွားနိုင်တဲ့ နေရာတွေကို ရှင်းလင်းပါ။